Howlgal dad lagu qabtay oo ka dhacay degmada Wadajir iyo maamulka oo ka warbixiyey |
Howlgal dad lagu qabtay oo ka dhacay degmada Wadajir iyo maamulka oo ka warbixiyey
Muqdisho–Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee gobolkan Banaadir.
Howlgalka oo ay horkacayeen mas’uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Wadajir ayaa waxaa sigaar ah looga fuliyey waaxda Xalane ee degmadaasi, waxaana uu ahaa howlgalka mid ay ciidamadu gudaha ugu galayeen.
Dadka degan xaafadaha ay ciidamadu ka sameeyeen howlgalkaas ayaa KNN u sheegay lagu qabqabtay dad u badan dhalinyaro, kuwaas oo la isugu geeyey hal goob, iyadoo markii dambe ay ciidamadu kala saareen, waxaana la sii daayey intii badneed dadkaas, halka ay ciidamo xubno yar la aadeen dhanka saldhiga degmada Wadajir.
War kooban oo kasoo baxay maamulka degmada Wadajir ayaa waxaa lagu shegay in dadka howlgalka lagu qabtay ay yihiin kuwo looga shakisan yahay in ay ka qeyb qaateen falal amni darro oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada Wadajir.
Howlgalka ay ciidamada dowladdu xalay ka sameeyeen degmada Wadajir ayaa imaanaya, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay Al-Shabaab xarunta Xalane ku weerareen hoobiyeyaal aan la garaneyn halka laga soo tuuray.